बाइबलका कथाहरू: उनीहरूले ढोगेनन् - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
चित्रमा हेर त। के तिमी यी तीन केटाहरू को हुन्, सम्झन सक्छौ? हो, यिनीहरू दानियलका तीन जना साथीहरू हुन्। दानियलले जस्तै यी तीन केटाहरूले पनि अशुद्ध खानेकुरा खान मानेका थिएनन्। बाबेलका मान्छेहरूले उनीहरूलाई शद्रक, मेशेक र अबेद्‌नगो भनेर बोलाउँछन्। तर हेर त, अरूले जस्तै उनीहरूले यो ठूलो मूर्तिलाई किन नढोगेको होला?
यहोवा आफैले लेखेर दिनुभएको दस आज्ञा के तिमीलाई अझै याद छ? यहोवाले दिनुभएको दस आज्ञामध्ये पहिलो आज्ञा यो थियो: ‘तैंले मबाहेक अरू कुनै देवताको उपासना नगर्नू।’ यी तीन जना केटाहरूले यही आज्ञा पालन गरिरहेका छन्। तर यसो गर्न भने उनीहरूलाई पक्कै सजिलो भएन।
आफूले बनाएको यस मूर्तिको सम्मान गर्न बाबेलका राजा नबूकदनेसरले थुप्रै ठूला मान्छेहरू बोलाएका थिए। राजाले भर्खरै मात्र सबैलाई यसो भनेका थिए: ‘तुरही, वीणा र अरू बाजा बजेको सुन्ने बित्तिकै सबैले यो सुनको मूर्तिलाई ढोग्नू। जसले यो मूर्तिलाई ढोग्दैन, त्यो तुरुन्तै आगोको भट्टीमा फालिनेछ।’
शद्रक, मेशेक र अबेद्‌नगोले मूर्तिलाई ढोग्दैनन्। यो थाह पाएर नबूकदनेसर असाध्यै रिसाउँछ। उसले तीनै जनालाई बोलाएर मूर्तिलाई ढोग्ने अझ एउटा मौका दिन्छ। तर यी केटाहरूले यहोवामाथि भरोसा राख्छन्। त्यसैकारण उनीहरू नबूकदनेसरलाई यसो भन्छन्: ‘हामी जुन परमेश्वरको सेवा गर्छौं, उहाँले नै हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। तर उहाँले बचाउनुभएन भने पनि हामी तपाईंले बनाउनुभएको यो सुनको मूर्तिलाई ढोग्दैनौं।’
यो सुनेर नबूकदनेसर रिसले आगो हुन्छ। त्यसपछि छेवैको आगोको भट्टिनेर काम गरिरहेका चाकरहरूलाई उसले यस्तो आज्ञा दिन्छ: ‘भट्टीको आगोलाई अझ सात गुणा तातो पार!’ त्यसपछि उसले आफ्नो सबैभन्दा बलिया सिपाहीहरूलाई बोलाएर शद्रक, मेशेक र अबेद्‌नगोलाई बाँधेर आगोको भट्टीमा फाल्न लगाउँछ। भट्टी धेरै तातो भएकोले ती बलिया सिपाहीहरू नै आगोको रापले भस्म हुन्छन्। उनीहरूले आगोभित्र फालेका तीन जना केटालाई चाहिं के हुन्छ नि?
राजा भट्टीभित्र हेर्छ र असाध्यै डराउँछ। उसले सोध्छ: ‘के हामीले तीन जना केटालाई बाँधेर आगोको भट्टीमा फालेका होइनौं र?’
‘हो’ भन्दै उसका चाकरहरू जवाफ दिन्छन्।
‘तर म त आगोमा चार जना मान्छे पो हिंडिरहेको देख्छु। अनि उनीहरूको हातखुट्टा पनि बाँधिएका छैनन्। उनीहरूलाई आगोले पोलेको जस्तो पनि देखिंदैन। अनि चौथो व्यक्ति त देवताजस्तै देखिन्छ।’ त्यसपछि राजा नबूकदनेसर भट्टीको ढोका नजिक गएर चर्को स्वरमा कराउँछ: ‘शद्रक! मेशेक! अबेद्‌नगो! हे परमप्रधान परमेश्वरका सेवकहरू हो, बाहिर निस्क!’
बाहिर निस्कँदा त उनीहरूलाई कुनै चोटपटक लागेकै हुँदैन। राजाले त्यसपछि यसो भन्छ: ‘शद्रक, मेशेक र अबेद्‌नगोको परमेश्वरको जय होस्! उहाँले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनुभएर यिनीहरूलाई बचाउनुभयो। किनभने यिनीहरूले आफ्नो देवताबाहेक अरू कुनै देवतालाई ढोग्न मानेनन्।’
हाम्रो लागि कत्ति राम्रो उदाहरण, होइन त? हामी पनि यी तीन केटाहरू जस्तै सधैं यहोवाप्रति वफादार हुनुपर्छ।
प्रस्थान २०:३; दानियल ३:१-३०.
बाबेलको राजा नबूकदनेसरले मान्छेहरूलाई के गर्ने आदेश दिन्छ?
दानियलका तीन साथीले सुनको मूर्तिलाई किन ढोग्दैनन्?
नबूकदनेसरले फेरि मौका दिंदा ती तीन हिब्रू केटाले यहोवामाथिको आफ्नो भरोसा कसरी देखाउँछन्?
शद्रक, मेशेक र अबेद्‌नगोलाई के गर्नू भनेर नबूकदनेसरले आफ्ना मान्छेहरूलाई अह्राउँछ?
आगोको भट्टीभित्र नबूकदनेसरले के देख्छ?
राजाले किन शद्रक, मेशेक र अबेद्‌नगोको प्रशंसा गर्छ अनि उनीहरूको उदाहरणबाट हामी के सिक्न सक्छौं?
दानियल ३:१-३० पढ्नुहोस्।
हाम्रो निष्ठाको जाँच हुँदा तीन हिब्रू केटाले देखाएजस्तै कस्तो मनोवृत्ति देखाउनुपर्छ? (दानि. ३:१७, १८; मत्ती १०:२८; रोमी १४:७, ८)
यहोवा परमेश्वरले नबूकदनेसरलाई कुन महत्त्वपूर्ण पाठ पढाउनुभयो? (दानि. ३:२८, २९; ४:३४, ३५)